Imibhalo kaChristian Facey Martech Zone |
Imibhalo nge UChristian Facey
Ngisungule i-AudioMob ngoba ngiyayiqonda indlela abadlali abakhungathekile abazizwa ngayo lapho umdlalo wabo uphazanyiswa ukukhangisa okungathandeki. Ukuhlanganisa obunye ubuchopho obuhle kakhulu embonini, isisombululo se-AudioMob sinikeza indlela yokuthi abathuthukisi bamageyimu weselula benze imali ngemidlalo yabo ngezikhangiso zomsindo ngenkathi begcina abadlali babo bebandakanyekile.
NgoLwesithathu, uDisemba 30, 2020 Lwesibili, Disemba 29, 2020 UChristian Facey
Izikhangiso zomsindo zinikeza indlela ephumelelayo, ebhekiswe kakhulu, futhi ephephile yomkhiqizo yokunciphisa umsindo futhi ithuthukise ukuthengisa kwawo kuNyaka Omusha. Ukukhuphuka kokukhangisa okulalelwayo kuyinto entsha embonini engaphandle komsakazo kodwa sekuvele kudala omkhulu umsindo. Phakathi kwomsindo, izikhangiso ezilalelwayo emidlalweni yeselula zibaza inkundla yazo; Ukuphazamisa imboni futhi kukhule ngokushesha, imikhiqizo ibona isikhangiso esiphezulu